सबैजना जाेरले हाँस्दै एकैपटक भने ह्यापी चकलेट डे - प्रभात खबर
सबैजना जाेरले हाँस्दै एकैपटक भने ह्यापी चकलेट डे
प्रभात खबर २७ माघ २०७७, मंगलवार १०:४० मा प्रकाशित
इटहरी ,माघ २७
क्याटबरीकाे टुक्रा मुखमा हाल्नासाथ जाेडसंग चुम्बन गरिन् श्वासै राेकिएला जस्तो भयाे । विहानीमा अाँखा खुलेकाे निमेष भरमै मुखमा चकलेट हाल्नु र कसिलाे चुम्बन गर्नु , यस्ताे लाग्याे, कैयाै दिनकाे याेजना र घण्टाै पर्खेर सिकारका लागि तयार सिकारी हुन उनी अनि मलाई अाज सिकार बनाइ । बल गरेर छुट्याए । उनले जिस्क्याउदै भनिन “Happy Chocolate Day बाबा “ ।
मुखमा अाएकाे चकलेट र अनाचक उनकाे अाेठकाे प्रेमिल स्पर्शले बेग्लै मिठास भरेकाे थियाे मुखमा अनि मनमा पनि । मैले सिरक छेउ लगाउदै घडी खाेजेर हेरे , मात्रै पाँच बजेकाे थियाे । सुत्नुपर्दैन लाटि?विहान विहान बिउँझाउछे भन्दै अाँखा तरेर हेरे । उनले सिरक सारेर र मलाई कसिलाे अंगालो हाल्दै भनिन , तपाईंलाई यहाँ त्यसै ल्याएकाे हाे र मैले? धेरै घुर्कि लाउने हैन है अहिले बिहान मात्रै भाछ रात पर्न बाकी नै छ नि ??
हामी साथीहरूलाई हाेटलमा छाेडेर ताराकाे घरमा थियाै , अझ उसैकाे रुममा थियौँ । त्यहाँ बस्ने व्यवस्था उनैले बनाएकी थिइन् । उनकाे कुरा सुनेपछि, हाे हजुर तपाईंको कुरा कहाँ इन्कार गर्न सक्छु र भन्दै फेरि सिरक अाेढे ।
उनि केही बाेलिनन्,मैले उनकाे अाेठमा लागेकाे क्याटबेरीलाई हातले पुछिदिए । उनी रिसाएझै गरिन, मैले उनकाे मुहार अगाडि अाएकाे कपाललाई छेउ पारेर बेजाेडसंग चुम्बन गरिदिए । उनिले पनि साथ दिइन तर केहिबेरमा मेराे कपाल नमज्जाले तानिन, मलाई साह्रै दुख्याे , मैले छाेडे । उनमा छट्पटी भएको पाएसी। अनि हत्तपत्त बत्ती बाले , उनकाे अाँखा पुरै भरिएको थियाे र अाेठ रातम्य देखे ।
हैन हिजाे लगाएको लालि अहिले सम्म पो छ त? साेधे ।
छि तपाई त कस्ताे माया नै नभाको, अाेठ नै टाेकिदिनुभयाे, कस्ताे दुख्याे भन्दै रिसाए झै गरिन । निकै बेर सम्म कसिलो चुम्बन गर्दा मलाइ भने अाेठ टाेकेकाे अाभास नै भएन ,मैले गालामा चुम्बन गर्दै माफी मागे, उनले यसरी माफी दिन्न भनिन । म तिर क्याटबेरी तेर्साइन, मैले एउटा टुक्रा क्याटबेरी उनकाे मुखमा हालिदिए अनि भने ह्यापी चकलेट डे मेरी सानी। फेरि अाेठमा चुम्बन गरिदिए तर यसपटक बिस्तारै अनि मलाइ अङ्गालोमा कस्दै फेरि मनहरु एक बनाइन्।
सबैजना जाेरले हाँस्दै एकैपटक भने ह्यापी चकलेट डेदिउँसाे ईन्दुले उनलाई प्रश्न गरिन , के हो भाउजू अाज त चकलेट डे पाे थियाे त , किस डे राति नै मनाउनु भए जस्ताे छ है ? ईन्दुकाे जिस्काइले उनले मलाई निकै रिसाएर हेरिन् ।
यसलाइ चि सोसमा खुब एलर्जी हुन्छ , त्यै हाे ईन्दु भन्दै पन्छिए । सबैजना जाेरले हाँस्दै एकैपटक भने ह्यापी चकलेट डे ।।